Izindaba - Ukuvezwa kokuvumelanisa
Isigaba Khuluma nabathengisi
Amakhamera we-RIY oblique
Izithombe ezisezingeni eliphakeme, ezinamandla futhi ezinokwethenjelwa ukumodeliswa kwe-3D
I-D2M / DG3M uhlelo lwama-lens oblique lwekhamera enama-lens amahlanu
I-D2Pros — Ikhamera ehamba phambili ye-multi-rotor drone oblique
I-D2 / D3 —- Iningi lekhamera yama-multi-rotor drone oblique
I-DG3 —— Ikhamera ye-APS-C eyedume kakhulu kunazo zonke encane kunazo zonke
I-DG3Pros — Ikhamera ye-drone oblique ehamba phambili ye-APS-C
I-DG4Pros — Ikhamera ye-drone oblique ehamba phambili ephelele
Amakhamera we-RIS oblique
ukukhanya nokuncane, ukunemba okuphezulu kwe-oblique photography Photography
Amakhamera we-RIE-lens eyodwa
Ikhamera yemephu yelensi eyodwa enobuchwepheshe obuphezulu nokunemba okuphezulu
AP-1 Ipharamitha-Lungisa Module
Ukukhweza okuzinzile kwe-M600pro
Isihlungi se-Sky-Filter-out Software
Iskena se-Sky Pre-processing Software
Amakhamera we-RIY oblique Amakhamera we-RIS oblique Amakhamera we-RIE-lens eyodwa
Umkhiqizi wekhamera omkhulu we-oblique waseChina owasungulwa ngonyaka we-2015, imvula yezulu ibigxile ku-oblique
Owokuqala ukwethula ikhamera enamalensi amahlanu oblique ngaphakathi kwe-1000g (D2), bese kuba yi-DG3 (650g), bese kuba yi-DG3mini (400g).
Ikhamera eyodwa, amalensi amahlanu. Lokhu kuhlanganiswa kukuvumela ukuthi uqoqe izithombe ngezindlela ezinhlanu endizeni eyodwa.
Umklamo we-Modular wenza kube lula kunoma ngubani ukuthi afunde ukufaka nokusebenzisa amakhamera.
Ikhwalithi ephezulu yesithombe nokucaciswa
I-lens ebonakalayo ebonakalayo ithuthukiswe.I-Double Gauβ eyakhelwe ngaphakathi kanye nelensi esezingeni eliphansi eyengeziwe
Isikhathi sokwehlukanisa kwamalensi amahlanu singaphansi kwama-10ns.
Noma ngabe i-UAV yama rotor amaningi, i-wing drone engaguquki, noma i-VTOL, amakhamera ethu angahlanganiswa nawo futhi a ...
Ucwaningo / i-GIS
Ukuhlola umhlaba, i-Cartography, i-Topographic, ukuhlola kwe-Cadastral, i-DEM / DOM / DSM / DLG
I-GIS, Ukuhlelwa kwedolobha, Ukuphathwa kwedolobha ledijithali, Ukubhaliswa kwezakhiwo
Ukwakhiwa / Izimayini
ukubalwa komhlaba, isilinganiso sevolumu, ukuqapha ukuphepha
Ukuvikelwa kwezakhiwo zezokuvakasha / zasendulo
Indawo ebabazekayo ye-3D, idolobha eliyisici, ukubona ngeso le-3D
Wezempi / Amaphoyisa
ukwakhiwa kabusha ngemuva kokuzamazama komhlaba, Umphenyi nokwakhiwa kabusha kwendawo yokuqhuma, Indawo yenhlekelele i ...
- KUNGANI RAINPOO
Izindaba Zenkampani Ubuchwepheshe beRainpoo
KUNGANI IKHAMELA LIDINGA “Ukulawulwa kokuvumelanisa”
Sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sendiza, i-drone izonikeza i-trigger-signal kumalensi amahlanu ekhamera ye-oblique. Ama-lens ayisihlanu kufanele adalulwe ngokomqondo ekuvumelaneni okuphelele, bese aqopha imininingwane eyodwa ye-POS ngasikhathi sinye. Kepha enqubweni yokusebenza yangempela, sithole ukuthi ngemuva kokuthi i-drone ithumele isignali ye-trigger, ama-lens amahlanu awakwazanga ukudalulwa ngasikhathi sinye. Kungani lokhu kwenzeke?
Ngemuva kwendiza, sizothola ukuthi inani eliphelele lezithombe eziqoqwe ngamalensi ahlukile ngokuvamile lihlukile. Lokhu kungenxa yokuthi lapho usebenzisa i-compression algorithm efanayo, ubunzima bendawo yokuthungwa komhlaba kuthinta usayizi wedatha wezithombe, futhi kuzothinta ukuvumelaniswa kokuvezwa kwekhamera.
Izici zokuthungwa ezihlukile
Lapho ukwakheka kwezici kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kukhula inani ledatha ikhamera edinga ukuyixazulula, ukuyicindezela, nokubhala kuyo, isikhathi esithe xaxa sokuqedela lezi zinyathelo. Uma isikhathi sesitoreji sifinyelela endaweni ebucayi, ikhamera ayikwazi ukuphendula isignali ye-shutter ngesikhathi, futhi isenzo sokuchayeka sisalela.
Uma isikhathi sesikhawu phakathi kokuvezwa kabili sifushane kunesikhathi esidingekayo ukuze ikhamera iqedele umjikelezo wesithombe, ikhamera izophuthelwa izithombe ezithwetshuliwe ngoba ayikwazi ukuqedela ukuvezwa ngesikhathi. Ngakho-ke, phakathi nokusebenza, ubuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa ikhamera kufanele busetshenziselwe ukuhlanganisa isenzo sokuchayeka kwekhamera.
I-R & D yobuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa
Phambilini sithole ukuthi Ngemuva kwe-AT kusoftware, iphutha lokuma kwamalensi amahlanu emoyeni kwesinye isikhathi lingaba likhulu kakhulu, futhi umehluko wesikhundla phakathi kwamakhamera ungafinyelela ku-60 ~ 100cm!
Kodwa-ke, lapho sihlola phansi, sithole ukuthi ukuvumelanisa kwekhamera kusesezingeni eliphezulu, futhi impendulo ifike ngesikhathi. Abasebenzi be-R & D badidekile kakhulu, kungani iphutha nesimo sesisombululo se-AT sikhulu kangaka?
Ukuthola izizathu, ekuqaleni kokuthuthukiswa kwe-DG4pros, sengeze isibali sikhathi sempendulo kwikhamera ye-DG4pros ukuqopha umehluko wesikhathi phakathi kwesiginali ye-drone trigger kanye nokuvezwa kwekhamera. Futhi kuhlolwe kuzimo ezine ezilandelayo.
Isimo A: Umbala ofanayo nokuthungwa
Isimo C: Umbala ofanayo, ukwakheka okuhlukile
Isimo D: imibala ehlukene nokwakheka
Ithebula lezibalo zemiphumela yokuhlola
Ngezigcawu ezinemibala ecebile, isikhathi esidingekayo sekhamera ukwenza ukubalwa kweBayer nokubhala kuzokwanda; ngenkathi yezigcawu ezinemigqa eminingi, ulwazi lemvamisa ephezulu kakhulu lukhulu kakhulu, futhi nesikhathi esidingekayo sokuthi ikhamera icindezelwe sizokwanda futhi.
Kungabonakala ukuthi uma imvamisa yesampuli yekhamera iphansi futhi ukuthungwa kulula, impendulo yekhamera yinhle ngesikhathi; kepha lapho imvamisa yesampuli yekhamera iphezulu futhi ukuthungwa kuyinkimbinkimbi, umehluko wesikhathi sokuphendula kwekhamera uzokhula kakhulu. Futhi njengoba imvamisa yokuthatha izithombe yanda ngokwengeziwe, ikhamera izogcina ingekho izithombe ezithathiwe.
Umgomo wokulawulwa kokuvumelaniswa kwekhamera
Ukuphendula lezi zinkinga ezingenhla, uRainpoo ungeze uhlelo lokulawula impendulo kwikhamera ukuze kuthuthukiswe ukuvumelaniswa kwamalensi amahlanu.
Isistimu ingalinganisa umehluko wesikhathi "T" phakathi kwe-drone ithumela isignali ye-trigger nesikhathi sokuchayeka kwelensi ngayinye. Uma umehluko wesikhathi u- "T" wamalensi amahlanu uphakathi kwebanga elivumelekile, sicabanga ukuthi amalensi amahlanu asebenza ngokuvumelanayo. Uma inani elithile lempendulo lamalensi amahlanu likhulu kunenani elijwayelekile, iyunithi yokulawula izonquma ukuthi ikhamera inomehluko omkhulu wesikhathi, futhi ekuvezweni okulandelayo, ilensi izonxeshezelwa ngokuhluka, futhi ekugcineni amalensi amahlanu azodalula ngokuvumelanayo futhi umehluko wesikhathi uyohlala ngaphakathi kwebanga elijwayelekile.
Ukusetshenziswa kokulawulwa kokuvumelanisa ku-PPK
Ngemuva kokulawula ukuvumelanisa kwekhamera, kuphrojekthi yokuhlola nokwenza imephu, i-PPK ingasetshenziselwa ukunciphisa inani lamaphoyinti okulawula. Njengamanje, kunezindlela ezintathu zokuxhuma zekhamera ye-oblique ne-PPK:
1 Elinye lamalensi amahlanu lixhunyaniswe ne-PPK
2 Wonke amalensi amahlanu axhunywe ku-PPK
3 Sebenzisa ubuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa kwekhamera ukuphakela inani elijwayelekile ku-PPK
Inketho ngayinye kulezi ezintathu inezinzuzo nezinkinga:
1 Inzuzo ilula, okungalungile ukuthi i-PPK imele kuphela isikhundla sendawo selensi eyodwa. Uma amalensi amahlanu engavumelanisiwe, kuzodala ukuthi iphutha lesikhundla samanye amalensi libe likhulu ngokwedlulele.
2 Inzuzo futhi ilula, ukuma kunembile, okungalungile ukuthi kungakhomba kuphela amamojula athile wokuhlukanisa
3 Izinzuzo ukubeka kahle, ukuguquguquka okuphezulu, nokusekelwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zamamojula wokuhlukanisa. Okubi ukuthi ukulawula kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi izindleko ziphakeme kakhulu.
Njengamanje kune-drone esebenzisa ibhodi le-100HZ RTK / PPK. Ibhodi lifakwe ikhamera ye-Ortho ukufeza i-1: 500 ye-topographic map-point-free-point-free, kepha lobu buchwepheshe abunakufinyelela ngokuphelele-iphuzu-elingenalo iphuzu lokuthwebula izithombe ze-oblique. Ngoba iphutha lokuvumelanisa lamalensi amahlanu ngokwawo likhulu kunokunemba kokuma komehluko, ngakho-ke uma ingekho ikhamera ye-oblique yokuvumelanisa okuphezulu, umehluko wemvamisa ephezulu awunamsebenzi ……
Njengamanje, le ndlela yokulawula kungukulawulwa kokungenzi lutho, futhi isinxephezelo sizokwenziwa kuphela ngemuva kokuthi iphutha lokuvumelanisa lekhamera likhulu kunomkhawulo onengqondo. Ngakho-ke, ngezigcawu ezinezinguquko ezinkulu ekubunjweni, nakanjani kuzoba namaphutha wephuzu ngalinye amakhulu kunombundu,. Esizukulwaneni esilandelayo semikhiqizo yochungechunge lweRie, iRainpoo isungule indlela entsha yokulawula. Uma kuqhathaniswa nendlela yokulawula yamanje, ukunemba kokuvumelanisa kwekhamera kungathuthukiswa okungenani nge-oda lobukhulu futhi kufinyelele ezingeni le-ns!
Ngaphambilini:Izinhlobo ze-GSD ne-carone carriers zithinta kanjani ukunemba okuhlobene kwemodeli ye-3D
Olandelayo:Umugqa we-R & D wochungechunge lomkhiqizo weRainpoo
Amakhamera we-RIY obliqueAmakhamera we-RIS obliqueAmakhamera we-RIE-lens eyodwaIzesekeli
Ucwaningo / i-GISISmart CityUkwakhiwa / IzimayiniUkuvikelwa kwezakhiwo zezokuvakasha / zasenduloWezempi / Amaphoyisa
Izindaba ZenkampaniIzindaba Zemboni
Umlando weRainpooInkazimulo GalleryOzakwethu / Abasabalalisi
14th phansi, No.377 Ningbo Road, Tianfu okusha Area, Chengdu, Sichuan, China
Ukwesekwa kwezilwandle: +8619808149372
Ibhokisi leposi: jack@rainpoo.com